छक्का पञ्जा २ अपार : प्रदर्शन लगातार : के छ ५१ औँ दिने तयारी ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२६ कार्तिक २०७४, आईतवार १५:३७
गत वर्षको रेकर्ड ब्रेकर सिनेमा ‘छक्का पञ्जा’को सिक्वेल ‘छक्का पञ्जा २’ ५१ औँ दिन मनाउने तयारीमा छ । आइतबार ४७ औँ दिनसम्म आईपुग्दा ‘छक्का पञ्जा २’चारवटा हलमा निरन्तर प्रदर्शन भईरहेको छ । सिटी सेन्टरम दिउँसो २ः३० बजेको एक शो, गोपीकृष्ण र गुण सिनेमा ग्वार्कोमा ३÷३ शो र अष्ट नारायण पिक्चर्स बालाजुमा सबै शोहरु ‘छक्का छक्का पञ्जा’ले पाएको छ । असोज ११ गते फूलपातीको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आएको ‘छक्का पञ्जा २’ले ४७औँ दिनसम्म आई पुग्दा १५ करोड भन्दा माथिको कारोबार गरेको छ ।
विदेशमा पनि प्रदर्शन
नेपालमा सफलतापूर्वक प्रदर्शन भएको ‘छक्का पञ्जा’विदेशमा पनि प्रदर्शन भईरहेको छ । गत शुक्रबार मात्रै कतारमा‘छक्का पञ्जा २’प्रदर्शन भएको छ । कतारको ग्राण्ड मल स्थित एसियन टाउन सिनेमामा प्रदर्शन भएको ‘छक्का पञ्जा २’ हेर्ने दर्शकहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । आयोजकका अनुसार झण्डै सय दर्शकले टिकट नपाएर फर्केका थिए । यहि कारण दर्शकहरुको माग अनुसार आगामी शुक्रबार फेरि कतारमा सिनेमा प्रदर्शन हुने भएको छ । त्यस्तै यो साता नै सिनेमा अमेरिकाका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन हुने भएको छ । अमेरिकाको लस एन्जल्स, बाल्टीमोर, नसभिल्ले, स्टेलुईस लगायतका शहरमा‘छक्का पञ्जा २’प्रदर्शन हुने भएको छ । यसका साथै युरोपका विभिन्न शहरमा पनि‘छक्का पञ्जा २’ प्रदर्शन हुँदैछ ।
के छ ५१ औं दिनको तयारी ?
बिहिबार ‘छक्का पञ्जा’ २ को प्रदर्शन ५१ औँ दिन पुग्दै छ । ‘छक्का पञ्जा’ ५१ औं दिन पुग्दा निर्माण टोलीले निकै भव्यताका साथ मनाएको थियो । सिनेमा प्रदर्शन भएका हरेक हलमा पुगेर ‘छक्का पञ्जा’को टोलीले साक्षात्कार गरेको थियो । तर यस पटक भने यो टोली अलि फरक तरिकाले ५१ औँ मनाउने तयारीमा जुटेको छ । गत वर्ष हल–हलमा पुगेको ‘छक्का पञ्जा’को टोली यस पटक भने एउटै हलमा सिमित हुने भएको छ । सिटी सेन्टरमा ५१ औँ दिने सेलिब्रेशनको लागि लोकेशन तय भएको छ तर कार्यक्रम कस्तो र कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा अहिले निर्माण टोली बीच छलफल भईरहेको छ ।
दीपाश्री निरौलाको निर्देशनमा तयार भएको ‘छक्का पञ्जा २’ मा दीपकराज गिरी, शिवहरि पौड्याल, जितु नेपाल, किरण केसी, केदार घिमिरे, प्रियंका कार्की, वर्षा राउत, स्वस्तीमा खड्का, स्वरुपपुरुष ढकाल, आयुष्मान देशराज जोशी लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका छ ।